नागरिक जिम्मेवार र सचेत भए कोरोना स‌ंक्रमणबाट बच्न र बचाउन सकिन्छ
Milan Ghimire calendar_today १९ चैत्र २०७६, 3:20 am
विश्वमा अहिले करिब ४० हजार नागरिककोे ज्यान लिई सकेको कोरोना भाइरसको संक्रमण विरुद्ध जिल्लाको समग्र अवस्था र यसबाट बच्नको लागि के गर्न सकिन्छ भन्ने सवालमा रामेछापकी प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रा देवी शर्मासंग जनता भ्वाईसको ५ प्रश्न ।
हाल विश्वमा ८ लाख भन्दा माथी मानिस कोरोना भाइरसबाट संक्रमित बनेका छन्
१.रामेछापमा कोरोना संक्रमणबाट बच्न कस्तो उपाय अपनाइएको छ ?
संक्रमणबाट बच्न यसको पूर्व तयारीलाई मध्य नजर गरेकाछौं । संचार माध्यमबाट बढी भन्दा बढि जनचेतनामूलक सन्देश प्रकाशनरप्रशारण गरेका छौँ । लक्षणहरु के देखिएका छन्, पूर्व तयारी के छन् बुझ्ने गरेका छौ । एउटा जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा प्रवेश गर्न छिमेकी जिल्लाका प्रशासनहरुसंग समन्वय गरेका छाँै । सम्भावित संक्रमणबाट जोगिन हामीले उच्च सावाधानी अपनाएका छाँै, हामीले समग्र जिल्लाका सम्बन्धीत निकायसंग समन्वय गरेका छौ ।
अहिले सम्म नाकामा जाँच गरेकाहरुमा कुनै पनि संक्रमण भेटिएको छैन । आउनेहरुलाई विशेष निगरानिमा राखेका छौ र लुकिछिपी आएकाहरुलाई खोजि गरेर उनीहरुलाई क्वारेन्टाईनमा राख्छौं ।
बाहिरबाट आउनेहरुलाई जिल्लाका हरेक नाकामा जाँच गरिन्छ, अहिले सम्म नाकामा जाँच गरेकाहरुमा कुनै पनि संक्रमण भेटिएको छैन । आउनेहरुलाई विशेष निगरानिमा राखेका छौ र लुकिछिपी आएकाहरुलाई खोजि गरेर उनीहरुलाई क्वारेन्टाईनमा राख्छौं ।
२.जिल्ला प्रशासनले सवारी चल्न नदिने भनि गरेको निर्णय के हो ? सवारी साधन रातारात आईरहेको छ ?
लकडाउनको बेला अत्यावश्यक बाहेक सवारी साधान चल्न हुदैन यो सबैलाई थाहा छ । जुन चलेका छन् ती अत्यावश्यक मात्रै हुन । अरु चल्न हुदैन र चलेका छैनन् । चलेका सवारी साधान पास लिएर चलेका छन् । हामीले जिल्ला भित्र चलेकाहरुलाई अत्यावश्यक बाहेक कसैलाई पास दिएका छैनौं र अहिले पछिल्लो समयमा विभिन्न निमार्ण आयोजनामा काम गर्न खाना बस्न नपाएर अलपत्रमा परेकाहरुलाई उद्दार गरेको हो । त्यसको लागि हामीले विभिन्न छिमेकी जिल्ला प्रशासनसंग समन्वय गर्छौँ, फोन, मेल गर्छौँं, उनीहरुको उद्दारको लागि सहजताको लागि विभिन्न निकायसंग समन्वय गर्छौँ । अब लगभग त्यस्ता कामदार सकिएकाले यो पनि पुर्ण रुपमा बन्द हुन्छ ?
हामीले मात्रै निर्णय गरेर पनि हुन्न । मन्त्रालयको नियम अनुुसार चल्नु पर्छ, त्यही प्रक्रिया अनुसार अघि बढी रहका छाँै
हामीले मात्रै निर्णय गरेर पनि हुन्न । मन्त्रालयको नियम अनुुसार चल्नु पर्छ, त्यही प्रक्रिया अनुसार अघि बढी रहका छाँै । भोलिका दिनमा यो अझ कडाई हुन्छ । अन्य नाकाबाट आउने मानिसको सन्र्दभमा यति जना मानिसहरु पठाउँदै छाँै भनेर छिमेकी जिल्लालाई जानकारी गराउछौँ । नागरिकहरु आफै जिमेवार भएर सतर्क भएमा यो संक्रमणबाट बच्न र बचाउन सकिन्छ । सबै नागरिकहरु सचेत भए मात्र कोरोना भाइरस संक्रमणबाट हामी जोगिन र फैलिनबाट रोक्न सक्ने सन्देश दिन खोजी रहेका छाँै. ।
३. पास लिएर आउने यात्रुको कारण कोरोना संक्रमणको डर हुन्न ?
यो सवालमा जिल्लाबाट रोजगारीका लागि गएकाहरु काम रोकिएर खान, बस्न समस्या भएका कारण आफ्नो गाउँ घर फर्किन्छन् यो राम्रै हो, उनीहरुलाई सुरक्षित गर्ने हाम्रो दायित्व पनि हो, र उनीहरु आउने बितिकै कोरोना भाइरस फैलिने पनि हैन, तर के हो भने उनीहरु जिल्लामा आएर याहाँको नियम र आफु कतिको सुरक्षित छु भन्ने उनीहरु अफैले बुभ्mनु पर्ने कुरा हो । तर यहाँ त जाँच र क्वारेन्टाइनमा मानिसहरु बस्न मानिरहेको छैनन् । अब उनीहरु मानेनन् भने जबर्जस्ति भएपनि क्वारेन्टाईनमा ल्याउने तयारीमा छौँ, यो अनिर्वाय गछौँ, क्वारेन्टाइन पनि सबै सम्बन्धीत निकायहरुलाई बढाउन आग्रह गरेको छु । यो चाडै हुन्छ।
४.प्रशासनले लकडाउनमा कडाई नगरेर कोरोना संक्रमणलाई फितलो रुपमा लिईरहेको त छैन ?
सचेत नागरिकले आफैले बुभ्mने कुरा हो । जो ब्यक्तिहरुले बुझ्नु हुन्छ उहाँहरु घरभित्रै बस्नु हुन्छ, त्यसैले यो नबुझनेको लागि मात्रै हो, र हामीले सबै पालिकाहरुलाई भनेको छौ, प्रहरी खटाएको छौँ, त्यसैले रोग फैलिन नदिन प्रशासनले मात्र कडाई गर्ने भन्दा पनि नागरिकहरु सचेत भए नै उत्तम हुन्छ ।
एक दिन सामान किने भने कम्तिमा पनि एक साता खान पुग्छ, लकडाउन सबैको लागि हो ।
एक दिन सामान किने भने कम्तिमा पनि एक साता खान पुग्छ, लकडाउन सबैको लागि हो । सामान किन्ने बहानामा सडक पेटिमा गफ गरेर बस्ने, लगायत गतिविधी निरन्तर गरेकोे धेरै गुनासो आयो । हामीले निर्णय गरेरै सामान खरिदको समय तोकिदिएका छौँ । त्यो समय भन्दा अब केही बहाना बाजी चल्दैन ।
५.संक्रमणबाट बच्ने अन्य आवश्यक कदम के छ ?
यसबाट बच्नको लागि सबै घरभित्रै बसाँै, बाहिरबाट भित्र गएपछि लुगा, हात, मुख, सबै सफा गरौँ। अनावश्यक बाहिर ननिस्कौँ । भिडभाडमा नजानुस्, घरमै बसेर पनि कोरोनाबाट बच्नको लागि कोरोना भाइरसको विरुद्धको सन्देशहरु पालना गरौ । सन्देशहरुको कुनै पनि अभाव छैन, राज्यलेनै प्रभाह गरेको छ । त्यसैले बालबच्चाको ख्याल गरौँ । घरमा बस्दा पनि निश्चित दुरी कायम गरौँ, झोलिलो खानेकुरा खाने गरौँ । यि कुराहरुको मात्र पालना भए हामी संक्रमणबाट बच्न सकिन्छ ।